Universal Online TV | हामीलाई ठूलो राहत मिल्योः मेस्सी हामीलाई ठूलो राहत मिल्योः मेस्सी
लिओनल मेस्सी भन्छन्, उनलाई यसअघि यस्तो पीडा भएको याद छैन । जबकी प्रशिक्षक जर्ज साम्पाओलीलाई ठूलो राहत मिलेको छ किनकी नाइजेरियामाथि रोमाञ्चक जित हात पार्दै अर्जेन्टिना विश्वकपको नकआउट चरणमा पुगेको छ ।
अब उसको भेट फ्रान्ससँग हुनेछ । समूह चरणको दुई खेलमा प्रदर्शन, खलाडी छनोट सबैलाई लिएर अर्जेन्टिनी टिमको खुबै आलोचना भयो । तर, अब के त ? के समस्याहरुलाई एकातिर थाती राखेर अर्जेन्टिना अघि बढ्न सक्छ ?
‘आफ्नो देशका मेस्सी बदलिए’
मेस्सी विश्वका उत्कृष्ट खेलाडीहरुको साथमा रसिया आएका थिए तर, सुरुवाति दुई खेल कठिन रहृयो । मेस्सीले आइसल्याण्डविरुद्ध पेनाल्टी मिस गरे भने क्रोएसियाविरुद्ध कुनै जादु देखाउन सकेनन् ।
तर, बार्सिलोनाका स्टारले सोमबार राति जादुमयी प्रदर्शनसँगै गोल गरे । ‘मेस्सी आफ्नो देशका लागि बदलिए,’ नाइजेरियाका पूर्वखेलाडी पिटर ओडेमवेङ्इ भन्छन् ।
मेस्सीले आफ्नो टिमको अस्तित्व रक्षाका लागि योगदान दिएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
इंग्ल्याण्डका पूर्वडिफेण्डर रियो फर्डिनान्ड सुरुवाति दुई खेलमा भन्दा सोमबारको खेलमा मेस्सीको बडी ल्याङ्गोइज नै फरक भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘मेस्सीले सोचिरहेका होलान् कि यो मेरो मञ्च हो र मेरो क्षण हो ।’
महान खेलाडीले चाहिएको बेला प्रदर्शन गर्ने भन्दै अर्जेन्टिनाका पूर्व खेलाडी एवं मेस्सीका टिममेट जाबालेटले भनेका छन्, यसले देआउँछ कि मेस्सी उत्कृष्ट हुन् ।’
नयाँ सुरुआत कि क्षणिक सुधार ?
अर्जेन्टिनाले अब नकआउट चरणमा आइतबार समूह सीको विजेता फ्रान्ससँग खेल्नेछ । सोमबार निर्णायक गोल गरेका रोजो भन्छन्, ‘हाम्रा लागि विश्पकपको यात्रा सुरु भयो ।’
डिडयर डेसच्याम्पको टोलीले सोमबार डेनमार्कसँग गोलरहित बराबरी खेल्यो । यो खेलमा फ्रान्सको प्रदर्शन सन्तोषजनक थिए ।
तर, बीबीसीका दक्षिण अमेरिकी फुटबल विज्ञ टिम भिकरी भन्छन्, ‘फ्रान्सका अगाडि अर्जेन्टिना कसरी टिक्छ, यो मुस्किल छ ।’